Fibre optic core reflection test - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Isivivinyo se-fiber optic core reflection siqhubeka nge-Optical Time Domain Reflectometer (OTDR). Yikuphi idivayisi esetshenziselwa ukuthola ngokunembile amaphutha kusixhumanisi se-fiber optical yamanethiwekhi wokuxhumana. I-OTDR yakha i-pulse ngaphakathi kwe-fiber ezohlolwa amaphutha noma ukukhubazeka. Imicimbi ehlukile ngaphakathi kwe-fiber idala ukusabalalisa emuva kweRayleigh. Ama-pulses abuyiselwa ku-OTDR futhi amandla awo abuye alinganiswe futhi abalwe njengomsebenzi wesikhathi bese ehlelwa njengomsebenzi we-fiber stretch. Amandla nesiginali ebuyisiwe isho ngendawo nokuqina kwephutha elikhona. Hhayi kuphela ukunakekelwa, kepha futhi nezinsizakalo zokufaka ulayini we-optical zisebenzisa ama-OTDR.
I-OTDR iyasiza ekuhloleni ubuqotho bezintambo ze-fiber optic. Ingakwazi ukuqinisekisa ukulahleka kwe-splice, ukukala ubude nokuthola amaphutha. I-OTDR ibuye isetshenziselwe ukwenza "isithombe" sekhebula le-fiber optic uma isanda kufakwa. Kamuva, ukuqhathanisa kungenziwa phakathi komkhondo wokuqala kanye nomkhondo wesibili othathwe uma kuphakama izinkinga. Ukuhlaziya umkhondo we-OTDR kuhlale kwenziwa lula ngokuba nemibhalo evela kuthrekhi yokuqala edalwe ngenkathi kufakwa ikhebula. I-OTDR ikukhombisa lapho izintambo zinqanyulwa khona futhi iqinisekise ikhwalithi yemicu, ukuxhumana kanye nezinhlayiya. Imikhondo ye-OTDR nayo isetshenziselwa ukuxazulula inkinga, ngoba ingakhombisa ukuthi amakhefu akuphi ku-fiber lapho imikhondo iqhathaniswa nemibhalo yokufaka.
UJera uqhubeka nokuhlolwa kwezintambo zokudonsa ze-FTTH kuma-wavelengths (1310,1550 no-1625 nm). Sisebenzisa i-OTDR YOKOGAWA AQ 1200 kulokhu kuhlolwa kwekhwalithi. Ukuhlola ikhwalithi yamakhebuli ethu ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende ethu angathola imikhiqizo ehlangabezana nezidingo zekhwalithi.
Senza lokhu kuhlola kuzo zonke izintambo esizikhiqizayo.
Ilabhorethri yethu yangaphakathi iyakwazi ukuqhubeka nochungechunge lokuhlolwa okujwayelekile kohlobo.